MAQAL:Barnaamij xiiso & qiimo leh oo ku aadan Xuska munaasabada 1-da Luulyo – SBC
MAQAL:Barnaamij xiiso & qiimo leh oo ku aadan Xuska munaasabada 1-da Luulyo
Posted by editor on Juun 30, 2012 Comments
Warbaahinta SBC oo aad uga barateen soo gudbinta barnaamijyada iyo warbixinada la xiriira munaasabadaha qaran ee ummada Soomaaliyeed baalka dahabka uga jira ayaa iyadoo la xusayo munaasabada maalinta qaranka ee 1-da Luuliyo waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij qiimo balaaran leh isla markaan xiiso weyn xambaarsan oo ku aadan munaasabada 1-da Luulyo.
Barnaamijkan waa mid ku saabsan munaasabaddii xorriyadda Somalia iyo midawgii labada gobol ee Woqooyiga iyo Koofurta, waxaana uu barnaamijku ka hadlayaa taariikh dheer oo ka soo billaabanaysa halka asal ahaan ay ka soo jeeddo Soomaalidu iyo unugga magaca Soomaaliya.
Barnaamijka inta aad dhagaysanayso waxaad ku maqli doontaan codod aygu marqaati ah oo ah dad joogay xilligaasi iyo kuwo xilal hayay wakhtigaas,Waxaa sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan hadduu Alle idmo kaalimo suugaaneed oo ah kuwii baigaas lagu luuqayn jiray.
Barnaamijkan qiimaha balaaran waxaa waqti badan galiyey oo aan uga mahadcelinaynaa wariyahayaga Maxamed Cibaar Diiriye oo soo jeedinaya barnaamijkan.
Link-ga hoose ee audio ka dhageyso barnaamijkan xiisaha badan.
Wariye Maxamed Cibaar Diiriye